Ezi ntụziaka nri nri ekele ọhụrụ sitere na White Castle
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ezi ntụziaka nri nri ekele ọhụrụ sitere na White Castle
White Castle na-eji ntụzịaka nri abụọ dị ọhụrụ na-eji ekele ekele afọ a, nke ekpughere naanị na OnlyFans. Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing na Southwest Jalapeño Cheese Slider Stuffing, ụdị dị iche iche na nhazi nri mbụ nke White Castle, ga-agbakwunye ọkụ na tebụl nri ọ bụla. Ekele a na-egosi ncheta afọ 30 nke mwepụta nri nri mbụ na 1991.
Dị ka aha ha na-egosi, ụdị nri abụọ a na-eji Jalapeño Cheese Slider na-esi ísì ụtọ na White Castle dị ka isi ihe.
Jamie Richardson, onye osote onye isi oche na White Castle kwuru, "Oge ezumike na-achọ ịkawanye ọkụ n'ihi na usoro nri ndị a na-ebu oke ọkụ." "Ihe Slider cheese anyị Jalapeño bụ ihe a ma ama na ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị yana n'okporo ụzọ friza ihe nri, yabụ anyị maara na ndị Cravers anyị ga-ahụ nri nri ọhụrụ na-ekpo ọkụ na ose."
White Castle esorola onye na-agbanyụ ọkụ na onye isi nri na Florida iji nyere aka nweta okwu ahụ gbasara ntụziaka nri ọhụrụ. Manny Washington Jr., onye isi mpaghara nke Orlando Fire Department na onye na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu, ga-egosi ndị Fans ka esi eme Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing, nke gụnyere iberibe anụ ezi crispy, ose jalapeño diced, celery, cilantro, cumin na shredded. chiiz jack ose, niile na-agbakọta ọnụ iji mepụta ekpomeekpo na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke otu-nke. Ọdịnaya ya ga-apụta na ọwa YouTube nke White Castle na akaụntụ Facebook, Twitter na Instagram ya.
N'igosi akụkụ ya oseose, White Castle na-ewebata ihe na-ekpo ọkụ na Southwest Jalapeño Cheese Slider Stuffing naanị na OnlyFans, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dabere na ndenye aha nke nwere ihe karịrị nde 180 nde ndị ọrụ debanyere aha yana ihe karịrị nde abụọ okike n'ụwa niile. Ụdị a na-ewe okpomọkụ ruo n'ọkwa ọzọ site n'ịgbakwụnye extra jalapeño na poblano-ede ede ka ọ ka na-akọwapụta ụtọ nri ọdịnala ị maara na ịhụnanya. Ndị na-akwado White Castle nwere ike ịlele usoro nri pụrụ iche na profaịlụ OnlyFans ọhụrụ nke ika ahụ.
"Ihe dị ukwuu banyere ụdị anụ ezi na ndịda ọdịda anyanwụ nke Jalapeño Cheese Slider Stuffing bụ na ị nwere ike ime nke ọ bụla dị ka ọkụ na ose dị ka ịchọrọ," Richardson kwuru. "Ndị a bụ nri akụkụ ga-enwerịrị maka mmemme Ekele na Enyi."
Dị ka ihe nkwado na ntụziaka nri ọhụrụ ndị a na-ekpo ọkụ, White Castle na-ere ọkụ na mbipụta 100th ụbọchị ọmụmụ ya "Cravey Boat." Dị na ụlọ ahịa ihe onyinye dị n'ịntanetị nke White Castle's Crave, ụgbọ mmiri Cravey zuru oke maka gravy, fondue, hollandaise na nri ndị ọzọ na-achọsi ike. Ọ dị naanị $15.
Na mgbakwunye, White Castle na-enye Combo Castle n'efu #1-#6 ma ọ bụ Combo nri ụtụtụ n'efu nye ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ niile na-arụ ọrụ na Ekele. Enweghị coupon ma ọ bụ ịzụrụ ihe dị mkpa, ọ bụ ezie na a na-arịọ ndị ọrụ ọkụ ka ha gosi njirimara wee bịarute tupu ehihie ka ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emechi n'isi ụtụtụ maka ezumike ahụ.
Ezi ntụziaka nri ọhụrụ dị mfe ma dị ụtọ na-abịarute maka ncheta afọ 30 nke Ntụziaka Slider® Stuffing mbụ. Ntụziaka ahụ malitere na 1991, mgbe otu onye otu White Castle ji akpa nke Sliders kwalite nri ezinụlọ nne nne ya. Kemgbe ahụ, nri ndị dabeere na Slider na-ewu ewu aghọwo ọ bụghị nanị omenala ekele, kamakwa ihe mgbakwunye na-eri nri abalị n'afọ niile maka ezinụlọ Craver n'ofe US.
N'afọ 2019, ezinaụlọ ahụ nwere ụlọ ọrụ ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa webatara ụdị ntụzịaka mbụ Slider Stuffing nke edegharịrị maka ndị anaghị eri anụ na ndị anaghị eri anụ. Iji ihe mmịfe Impossible™ dị ka ihe bụ isi ihe, White Castle Impossible™ Slider Stuffing nyere ndị na-adịghị eri anụ ohere ịnụ ụtọ uto onye ọ bụla na-achọsi ike.
White Castle Cravers nwere ike zụta Original Sliders na Jalapeño Cheese Sliders na ngalaba friza na ụlọ ahịa nri na mba niile. Enwere ike zụta ihe mmịfe mbụ, ihe mmịfe cheese Jalapeño na ihe mmịfe agaghị ekwe omume n'ụlọ nri White Castle. A na-enye ntụziaka nri nri n'okpuru. Maka echiche uzommeputa pụrụ iche site na iji ihe nchịkọta nhọrọ White Castle, gaa na www.whitecastle.com/food/recipes.
Ezi ntụziaka nri dị iche iche na-eto eto na White Castle ga-amasị mmasị dị iche iche Craver. Atọ nri Ezi ntụziaka na-depụtara n'okpuru. Ntụziaka nke anọ - na nke kacha ewu ewu - dị ugbu a na White Castle's OnlyFansprofile.
Oge nkwadebe: minit 20
Oge nri: 45 ruo 50 nkeji
Ọrụ: 4 ruo 6
2. 10 tablespoons bọta
3. 1 iko celery, diced
4. 1 ose jalapeño, finely diced
5. 10 mpekere anụ ezi, sie ya na chopped (ihe dịka 1¼ iko)
6. 1 teaspoon nnu
7. ½ teaspoon ose
9. ¼ iko cilantro, bee
10. ¾ iko toki ma ọ bụ efere ọkụkọ
12. 1 cup shredded ose jack cheese
1. Gbazee bọta na nnukwu skillet n'elu ọkara okpomọkụ. Tinye celery diced na ose jalapeno ma sie nri ruo mgbe ọ dị nro.
2. Heat Sliders dị ka ntuziaka ngwugwu. Bee n'ime akụkụ anọ.
3. N'ime nnukwu efere ma ọ bụ pan, gwakọta quartered Sliders na chopped anụ ezi, nnu, ose na cumin. Gwakọta cilantro na akwụkwọ nri si na skillet. Ọ bụrụ na ị na-esi nri na toki, gbakwunye cheese jack ose ebe a, yana.
4. Na obere efere, jikọta efere na àkwá. Wunye n'elu nri ngwakọta na-akpali ruo mgbe kesara even.
5. Ebe nri ngwakọta na 9 × 13 mmiri efere na top na ose jack cheese.
6. Ime na 350 degrees maka nkeji 30 kpuchie. Mgbe ahụ, kpughee ma gaa n'ihu na-esi nri ruo mgbe agbachara nchara n'elu, ihe dị ka nkeji 15 ruo 20 ọzọ.
Ntụziaka ihe mmịfe mbụ nke White Castle
Oge nkwadebe: 5 ruo 10 nkeji
Oge nri: 35 nkeji
Ihe oriri: ihe dị ka iko 9 nke nri (zuru oke toki 10 ruo 12-paụnd)
1. 10 ruo 12 White Castle Original Sliders, enweghị pickles (si na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Castle ma ọ bụ onye na-ere ahịa mpaghara)
2. 1½ iko celery diced
3. 1¼ teaspoons n'ala thyme
4. 1½ teaspoons ala sage
5. ¾ teaspoon n'ala coarsely ose ojii
6. ¼ iko efere ọkụkọ (ma ọ bụ 1 iko maka ụdị casserole)
1. Dịrị ihe nkedo ahụ n'ime iberibe nha ma tinye n'ime nnukwu efere ngwakọta.
2. Tinye celery diced na nnu.
3. Tinye ¼ iko ofe ọkụkọ ma gbanye nke ọma.
4. Tinye nri n'ime oghere nke toki ma sie nri dịka ị na-emekarị.
5. Ọ bụrụ na ị na-esi nri dị ka ihe na-esi nri, tinyekwuo ¾ iko efere ọkụkọ ma gbanye nke ọma.
6. fesa ma ọ bụ mmanụ ihe oriri 2-quart casserole.
7. Nyefee nri na efere efere na akpọọ nkụ na 350 degrees maka 35 nkeji.
White Castle® agaghị ekwe omume™ ihe mmịfe
Ihe oriri: ihe dị ka iko 9 nke nri
1. 10 White Castle® agaghị ekwe omume™ ihe mmịfe, enweghị pickles
6. 1 cup akwukwo nri efere
1. Dịrị ihe na-agaghị ekwe omume™ ihe mmịfe n'ime iberibe nha ma tinye n'ime nnukwu efere ngwakọta.
3. Tinye 1 iko ofe akwukwo nri ma gbanye nke ọma; ka ihe oriri na-anọdụ ala maka nkeji 10 iji banye.
4. fesa ma ọ bụ mmanụ ihe oriri 2-quart casserole.
5. Nyefee nri na efere efere na akpọọ nkụ na 350 degrees maka 35 nkeji.